Iwo gumi akanakisa mamiriro edesktop eGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Kugoverwa, Desks, Graphics
Kune akati wandei mamiriro edesktop eGNU / LinuxMamwe maforogo kubva kune vamwe, uye mamwe akagadzirwa kubva pakutanga. Ngazvive sezvazvingaite, uku kusiana kune zvakwakanakira, senge mukana wekutsvaga wakakodzera kune wega wega mushandisi, zvinoenderana nezvavanoda uye zvavanofarira zvekuona.
Asi zvinogona zvakare kuvhiringidza kana zvasvika kune sarudza chaicho. Kune avo vari kutsvaga kusarudza yavo yemberi desktop desktop, heino yepamusoro 10 runyorwa rweimwe akanakisa desktop mamiriro ...
Wepamusoro gumi yenzvimbo dzakanakisa dzedesktop
Sezvandinogara ndichitaura, yakanakisa desktop nharaunda, kugovera, mupepeti, nezvimwe, zvinogara zvakadaro iyo inonyanya kukunakira iwe. Naizvozvo, usatore iyi yepamusoro 10 senzvimbo chinzvimbo apo chekutanga chiri chakanakisa kupfuura chese uye chegumi icho asi. Kwete, izvi hazvisi zve izvo, irwo runyorwa pamwe nezvimwe zvakanaka kubatsira avo vasina kunyatso kujekesa kusarudza yavo. Ivo vese vane zvayakanakira nezvayakaipira, uye zvinoenderana nezve chii, vanogona kunge vasiri vese vakanyanya ...
GNOME: ndeimwe yeakakura maviri, pamwe neKDE Plasma. Yakaiswa seimwe yezvakatadza zvekugoverwa kwakawanda. Icho chiri nyore, chine simba uye chiri nyore kushandisa. Iyo inopa chiitiko chakanaka, pamwe nemukana wekuwedzera ekuwedzera ekuwedzera mabasa, neMetacity semaneja wehwindo, Nutilus semaneja wefaira, rutsigiro rwezviziviso, nezvimwe.
KDE Plasma: iri iro rimwe basa rakakura, kuve rakareruka (ikozvino hongu), kuti ugone kuchengetedza zviwanikwa. Uye zvakare, ine simba rakanyanya uye inogadziriswa zvakanyanya, ndosaka ma hacker mazhinji achiisarudza kuigadzira sezvavanofarira. Iyo ine yakachena kwazvo uye yakapusa interface, iine Dolphin semaneja wefaira, Kwin semaneja wehwindo, marinhi emazuva ano, zviziviso, uye rutsigiro rukuru rweHDPI skrini.
Cinnamon: forogo, kana chinobva, cheGNOME shel, saka, inogovera akawanda akajairwa mapoinzi nayo. Mune ino kesi, ine zvimwe zvinowedzerwa senge mamenu ayo, marongero ayo, mascreen saver, nezvimwe. Ndiine MDM semaneja wescreen, Nemo semaneja wefaira, Muffin semaneja wewindows, maneja maneja wayo, uye Blueberry kuti iite nyore kumidziyo yeBluetooth.
MATE: Iyo zvakare inzvimbo inonzwisisika kwazvo, ichibuda sekuwedzera kweGNOME 2. Iri ibasa rinowedzerawo zvinoshanda zvisingaite maapplication, akadai sePluma mameseji edhisheni, ayo ekupedzisira, Bhokisi semaneja wefaira, nezvimwe.
Budgie- Imwe nharaunda inozivikanwa yedesktop yakagadzirwa neSolus projekti iyo inogona kuiswa zvino pane akasiyana ma distros akadai seUbuntu, Manjaro, Arch Linux, nezvimwe. Yakagadzirirwa kuve yakapusa uye yakajeka, zvichibva paGNOME matekinoroji seGTK +.
Xfce: inharaunda ine chimiro chemazuva ano, uye ine hushamwari. Asi inomira kunze kune yakaderera kudiwa kwezviwanikwa zvainazvo, ndiko kuti, iri yakajeka desktop desktop. Yakanaka kune avo vasingade kudya akawanda masisitimu ezvemidziyo, kungave nekuti vane komputa yekare kana zviwanikwa zvishoma. Iyo inoshandisa Xfwm semaneja wewindows, Thunar semaneja wefaira, ine yayo yega musangano maneja, nezvimwe.
LXQt: imwe mwenje yakajeka, yakapusa uye inokurumidza yakafanana neiyo yapfuura. Inonyanya kugadzirirwa gore reruzivha nharaunda kana kumamishina ekare asina akawanda RAM uye CPU zviwanikwa. Iyo yakavakirwa pamaraibhurari eQt senge KDE, uye inoshandisa pcmanfm-qt semaneja wefaira, lxsession semaneja wechikamu, lxterminal seye emulator yekupedzisira, lxqt-mumhanyi seyekutanga app, nezvimwe.
Pantheon: ndeimwe yakave inozivikanwa muyekutangaOS, kunyange ichigona kuiswa mune mamwe ma distros. Iyo inzvimbo yedesktop inoedza kuteedzera kutaridzika kweApple's macOS, ichipa chiitiko chakanaka, kureruka, minimalism uye nekuchenjera kutaridzika kutaridzika. Chaizvoizvo chiri GNOME nehombodo yayo, sezvakaita Kubatana. Iyo yakareruka kupfuura GNOME Shell, uye inosanganisa zvimwe zvekushandisa zvakadai sePlank (doko), Epiphany (web browser9, Scratch (chinyorwa mupepeti), Birdie (Twitter mutengi), iyo Gala hwindo maneja (zvichibva paMutter).
Deepin: DDE zvakare iri nyore, yakashongedzwa uye inogadzira Chinese desktop desktop. Yakagadzirirwa Deepin OS, uye inowanikwa kune mamwe ma distros. Iine zvimwe zvakafanana nePantheon.
kubatana: Ichi chirongwa kubva kuCanonical chakaperekedza Ubuntu kune akawanda maBhaibheri, asi ivo vapedzisira vafunga kusiya chirongwa ichi voshandisa yakachena GNOME. Kubatana kwaive graphical Shell pamusoro peGNOME, ichitsiva yekutanga Shell. Asi yakanga iine tweaks inodikanwa nevazhinji, ndosaka ndaida kuiisa, kunyangwe iri kuramba ichishandiswa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Wepamusoro 10 Desktop Nzvimbo dzeGNU / Linux
Iwe unokanganwa nezve LXDE kwandiri zvakanakisa nekure.
GNOME Shell **
Isu tinoda yemahara software uye nhasi ndiyo nguva yekuzvitaura #ilovefs